फिल्मको प्रचारमा मेनुका प्रधान किन हिंड्दिनन् ? « Ramailo छ
फिल्मको प्रचारमा मेनुका प्रधान किन हिंड्दिनन् ?
प्रकाशित मिति : Jan 17, 2018
समय : 12:26 pm
अभिनेत्री मेनुका प्रधानलाई फिल्मको प्रचार प्रसारमा साथ नदिएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । अभिनय गरेका कमै फिल्महरुको प्रचार प्रसारमा मेनुका देखिने गरेकी छन् । आखिर किन हिंड्दिनन् त मेनुका आफुले अभिनय गरेका फिल्मको प्रचारमा ? यो भिडियो हेर्नुस् :
‘म आफैंले चाहेर फिल्मको प्रचारमा नहिंडेको होइन’, मेनुका भन्छिन्, ‘जब फिल्मको प्रचार गर्ने बेला हुन्छ त्यतिबेला के मिल्दैन मिल्दैन ? कहिले बिरामी पर्छु । कहिले फिल्मको सुटिङ पर्छ । तर जानी जानी फिल्मको प्रचार नहिंडेको भने होइन । प्रचारमा हिंड्न मलाई पनि मन छ ।’
मेनुकाले अभिनय गरेको फिल्म ‘लाल पुर्जा’ शुक्रबार बाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ भने ‘शेरबहादुर’ माघ १९ देखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । यी फिल्मको प्रचार प्रसारमा भने मेनुकाको समय मिलि रहेको छ ।